MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward E-top up promotion mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
E Top-up Bonus အစီအစဉ်
လေးစားရပါသော MPT Prepaid Plan သုံးစွဲသူများအတွက် E-Top up bonus အစီအစဥ်ကို MPT မှ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ သတ်မှတ်ထားသော E-Top up ချန်နယ်များမှတဆင့် ၁၅၀၀ကျပ် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် ၅၀၀ကျပ် ပြန်လည်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် သုံးသလောက်ပေး နှုန်းထားဖြင့် သက်တမ်း (၅)ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး Bonus လက်ကျန်ပမာဏနှင့် သက်တမ်းကို သိရှိရန် *224# ကို ခေါ်ဆို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
များများဖြည့်လေ ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်များများ ပြန်လည်ရယူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများမှတဆင့် ဖုန်းငွေဖြည့်၍ရယူနိုင်ပါသည်။
1.MPT Pay App နှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း
2.MPT4U App မှတစ်ဆင့် MPT Payနှင့်ငွေဖြည့်ခြင်း
3.MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်ခြင်း
E Top-up ၁၅၀၀ ကျပ် ငွေဖြည့်ပြီး ၂၀၀၀ ကျပ် ရယူလိုက်ပါ!
ငွေဖြည့် အပို လက်ဆောင်
၁၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ်
(၅) ရက် MPT Pay App နှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း
MPT4U App မှတစ်ဆင့် MPT Pay နှင့် ငွေဖြည့်ခြင်း
MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်ခြင်း
MPT Pay မှငွေဖြည့်နည်းကြည့်ရန်
MPT4U App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်
MPT Pay App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်
နီးစပ်ရာ MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှတစ်ဆင့်လည်း E Top Up ဖြင့် ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။
Opt-in ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
သတ်မှတ်ထားသော ငွေဖြည့်ပမာဏ (၁၅၀၀ ကျပ်) ကို MPT Pay နဲ့ ငွေဖြည့်၍ ဖြစ်စေ၊ MPT4U App မှတဆင့် MPT Pay နဲ့ငွေဖြည့်၍ ဖြစ်စေ၊ MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များ (App, *125#, self-care) မှတဆင့် ငွေဖြည့်၍ဖြစ်စေ ငွေဖြည့်လက်ဆောင် (၅၀၀ ကျပ်) ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid စနစ်/ Base Tariff/ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ငွေဖြည့်၍ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ်။ postpaid စနစ် နှင့် CDMA အသုံးပြုနေသူများမပါဝင်ပါ။
ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သို့သော် အခြားသူများသို့လွှဲပြောင်းခြင်း၊ main balance ကဲ့သို့အသုံးပြုခြင်း၊ ပက်ကေ့ချ်များဝယ်ယူခြင်း တို့အတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
အပိုလက်ဆောင် သက်တမ်းမှာ (၅)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
*224# ကိုခေါ်ဆိုပြီး Bonus လက်ကျန်ပမာဏနှင့် သက်တမ်းကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဖုန်းငွေဖြည့်သည့် အကြိမ်ရေ သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ အကန့်အသတ်မရှိ ဖုန်းငွေဖြည့်၍ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်လက်ဆောင်များသည် ပေါင်းစည်းသွားပြီး နောက်ဆုံး ရရှိ အသုံးပြုနိုင်သည့် ငွေဖြည့်သက်တမ်းအတိုင်း ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ E Top-up Bonus အစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
MPT သုံးစွဲသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော E Top up ချန်နယ်များမှတဆင့် ၁၅၀၀ကျပ် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင် ၅၀၀ကျပ် ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ များများဖြည့်လေ အပိုလက်ဆောင်များများ ပြန်လည်ရယူနိုင်မည့် အစီအစဥ်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် (၅) ရက် MPT Pay App နှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း
၂။ ဘယ်သူတွေ ငွေဖြည့်နိုင်မှာလဲ?
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid စနစ်/ Base Tariff/ လက်ရှိအသုံးပြုနေသူများ ငွေဖြည့်၍ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါတယ်။ postpaid စနစ် နှင့် CDMA အသုံးပြုနေသူများမပါဝင်ပါ။
၃။ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ ငွေဖြည့်ရမှာလဲ?
၄။ ရရှိထားတဲ့ လက်ဆောင်ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ။
ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အခြားသူများသို့လွှဲပြောင်းခြင်း၊ main balance ကဲ့သို့အသုံးပြုခြင်း၊ ပက်ကေ့ချ်များဝယ်ယူခြင်း တို့အတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အပိုလက်ဆောင် သက်တမ်းမှာ (၅)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ MPT Pay ကို အသုံးပြု၍ MPT4U တွင် (၁၅၀၀) ကျပ်ကို ဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ ထို့နောက် နီးစပ်ရာ MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှတဆင့် (၁၅၀၀) ကျပ် ထပ်မံငွေဖြည့်ထားပါတယ်။ ဘယ်လောက် အပိုလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ?
သတ်မှတ်ထားသော ချယ်နယ်များမှ နှစ်ကြိမ်ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းအတွက် တစ်ကြိမ်လျှင် (၅၀၀)ကျပ်ဖြင့် နှစ်ကြိမ်အပိုလက်ဆောင် စုစုပေါင်း ၁၀၀၀ကျပ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေဖြည့်လက်ဆောင်များသည် ပေါင်းစည်းသွားပြီး နောက်ဆုံး ရရှိ သည့် သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၆။ (၁၅၀၀)ကျပ် ကို ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်/mobile banking မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်ထားပါတယ်။ ၅၀၀ကျပ် ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ရရှိနိုင်ပါသလား?
မရရှိနိုင်ပါ။ E Top-up Bonus အစီအစဉ်သည် MPT Pay နဲ့ ဖုန်းငွေဖြည့် ၍ ဖြစ်စေ၊ MPT4U App မှတဆင့် MPT Payနဲ့ငွေဖြည့်၍ ဖြစ်စေ၊ MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှဖြစ်စေ ငွေဖြည့်သွင်းမှသာ အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခြား နည်းလမ်းများဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်မည် ဆိုပါက လက်ဆောင် မရရှိနိုင်ပါ။
၇။ MPT Pay အသုံးပြု၍ MPT4U တွင် (၃၀၀၀) ကျပ်ကို ဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ရရှိနိုင်ပါသလား။
မရရှိနိုင်ပါ၊ ၁၅၀၀ ကျပ် နှစ်ခါ ဖုန်းငွေဖြည့်၍ ၅၀၀ကျပ် ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို နှစ်ခါရယူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ၃၀၀၀ကျပ် ငွေဖြည့်မည်ဆိုပါက လက်ဆောင်မရရှိနိုင်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော ငွေဖြည့်ပမာဏ ၁၅၀၀ ကျပ် ဖြည့်သွင်းမှသာ လက်ဆောင်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ တစ်နေ့လျှင် မည်သည့်အကြိမ်ခန့် ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်ပါသလဲ။
ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်လက်ဆောင်များသည် ပေါင်းစည်းသွားပြီး နောက်ဆုံး ရရှိ အသုံးပြုနိုင်သည့် ငွေဖြည့်သက်တမ်းအတိုင်း ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
*224# ကိုခေါ်ဆိုပြီး လက်ကျန်ပမာဏနှင့် သက်တမ်းကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။